Bilaogera lasa mpiasan’ny serasera an’antoko politika · Global Voices teny Malagasy
Bilaogera lasa mpiasan'ny serasera an'antoko politika
Voadika ny 16 Marsa 2019 3:19 GMT
Tamin'ny taona 2008, nipoitra tamin'ny lohateny lehibe ilay bilaogera Maleziana Syed Azidi Syed Aziz tamin'ny fiantsoana ireo bilaogera Maleziana mba hanantona (na hametraka) ny sainam-pirenena mivadika ao amin'ny bilaogin'izy ireo. Famantarana ny firenena iray ao anatin'ny fahoriana izany. Ny antony nanaovany izany, araka ny filazan'i Syed tenany, dia tsy tena hoe fitsinjovana ny hafa loatra.
Raha maro ireo bilaogera namaly ny antsony, izay nahatonga azy ho maherifon'ny firenena ho an'ny sasany, ary indrindra indrindra raha nosamborina noho ny nataony izy, dia nilaza i Syed fa nomena RM4 tapitrisa (1,25 tapitrisa dolara) mandritra ny telo taona izy mba handoto ny fitokisan'ny praiminisitra teo aloha, Tun Abdullah Ahmad Badawi sy ny fitondrany amin'ny alàlan'ny bilaoginy.
Araka ny tati-baovao, nilaza i Syed fa nanakarama azy ny governemanta PAS ao Kelantan, fanajakana iray ao Malayzia avaratra mba hanao “ady psikôlôjika” hanaratsiana ny fiaraha-mitantana, Barisan Nasional (BN), amin'izay mijanona eo amin'ny fahefana ao amin'ny antenimieram-panjakana ao Kelantan ny PAS.
Noho ny fanambarany, dia nanomboka nanao fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ny Komity miady amin'ny kolikoly ao Malezia (Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) ). Tsy mazava hoe nahoana i Syed no vao haingana vao nanambara fa karamaina izy sy ny vola raisiny amin'izany, saingy raha raisina amin'ny lahatsoratra bilaoginy ny raharaha, dia toa midika hoe “fanararaotam-pahefana” sy “fivadiham-pitokisana” ataon'ny governemanta PAS ao Kelantan izany.
Na dia tsy misy maharatsy aza ny antoko politika manakarama “fanatsarana endrika” na “marika”, ny fanontaniana mipetraka dia hoe avy aiza ny famatsiam-bola. Tamin'ny taona 2009, mpiasan'ny seraseran'ny PMBK, sampan'ny orinasa mpampiasa vola i Syed. Tamin'ny volana Novambra tamin'io taona io, nolazaina izy fa tsy ilaina intsony ny tolotra omeny.